PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: February 2013
ပြည်သူ့ရဲ တွေတဲ့ဗျာ... လက်နက်မဲ့ အဘွားကြီး နှစ်ယောက်ကို ယောက်ျား ရင့်မ ကြီးတွေက ၀ိုင်းရိုက်လို့... မြင်မကောင်း ရှု့မကောင်းပဲ။ ဒီပြည်သူတွေက ဘယ်သူ့ကို အားကိုးပြီး နေရမှာလဲ... မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ လူ့ငနွားတွေ... အမိန့်ပေးရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဆင်ခြင် ဥာဏ် လောက်ကတော့ ရှိသင့်တာပေါ့။
သတင်းရင်းမြစ်ကို (FB) အင်တာနက်စာမျက်နှာက ကူးယူခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ ကွပ်မျက်မိန့်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ (သောကြာနေ့) တွင် ကူမင်းမြို့တရားရုံးက လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၊
သတင်းရင်းမြစ် - တောင်ကြီးတိုင်းမ်
အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် ကေအိုင်အိုက ပြည်သူ့သဘောထား ရယူ
ကေအိုင်အိုနဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေ ပါဝင်ဖို့ လူထု ကိုယ်စားလှယ် တွေဆီက အကြံဥာဏ်နဲ့ သဘောထားတွေ ရယူခဲ့တယ်လို့ ကေအိုင်အို ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးလနန်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ နဲ့ ၂၃ ရက်က ဌာနချုပ်လိုင်ဇာမှာ ကေအိုင်အိုက လူထု ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သဘောထား ရယူခဲ့တာပါ။
ဦးလနန်က “အဓိကက အခုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ လူထုကိုချပြ၊ ရှင်းပြတာ လုပ်တယ်။ လူထုကလည်း ဒီအပေါ်အခြေခံပြီး အကြံဥာဏ်ပေးတာ၊ သူတို့ သဘောထား တင်ပြတာရှိတယ်။ လူထုရဲ့ သဘောထားတောင်းဆိုတဲ့ လူထုအစည်းအဝေးပွဲလို့ ပြောလို့ရတယ်။ အကြံဥာဏ်တွေ တော်တော် ပေးတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ အထိုက်အလျောက်အရ အသုံးပြုသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာရှိတယ်။”
ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အခြားဒေသက ကချင်နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိနားလည်တဲ့ သူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အတွ့အကြုံရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ စုစုပေါင်း ၈၀ လောက်
မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်အဖွဲ့နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံရောက် မြန်မာပြည်သားများ၏ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားသော သမ္မတ၏ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
သမ္မတရဲ့ ကြွေးမြီ ကိစ္စ ရှင်းလင်းပြောဆိုချက်
သတင်းရင်းမြစ် - (FB) အင်တာနက်စာမျက်နှာသတင်းမှ ကူးယူခဲ့ပါသည်။
ပြည်မြို့ နှင့် ရွှေတောင်မြို့တွင် လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်သည့် ကိစ္စ ယနေ့ည ဆန္ဒပြမည်
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မီးပျက်သည့် ကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ မသိပါ၊ ဒါဟာ ပြည်သူတွေကို တရားဝင် အသိမပေးခဲ့ပါ၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိဘဲ ပြည်သူကို ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတွေက ကျေးဇူး တရား မသိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အချိန်သည် စာမေးပွဲ အလွန် နီးကပ်နေသော အချိန် ဖြစ်ပါသဖြင့် -----
Posted by PNSjapan at 8:47 AM0comments
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာအလုပ်သမား ထောင်နှင့်ချီ ရှိသည့် အထည်ချုပ် စက်ရုံတရုံ၌ အလုပ်သမား ရပိုင်ခွင့်များအတွက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆို နေသည်မှာ ၁၄ ရက် ရှိပြီဖြစ်ပြီး ပြေလည်မှု တစုံတရာ မရရှိသေးကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“ကျနော်တို့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုနေတာက မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုပဲ ကျွေးဖို့၊ ဂျော်ဒန် အလုပ်သမား အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း တာဝန်ရှိသူတွေက လူမျိုးရေးခွဲခြား ဆက်ဆံနေတာတွေ ရပ်တန့်ပေးဖို့၊ လက်ရှိ လုပ်အားခ လစာ ၁၅၅ ဒီနာ (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၁၈ ဒေါ်လာခန့်) က အရမ်း နည်းလွန်းနေလို့ တလကို ၂၀၀ ဒီနာ ( အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၈၂ ဒေါ်လာခန့်) အထိ တိုးပေးဖို့တွေလည်း ပါတယ်” ဟု ဂျော်ဒန် ရောက် ဆန္ဒပြ မြန်မာ အလုပ်သမား တဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်ဇင်ဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ Ramtha မြို့ ဟာဆမ်စက်မှုဇုံရှိ အထည်ချုပ် စက်ရုံတခုဖြစ်သော Centuary Miracle Apparel Mfg. Co.,Ltd ၌ မြန်မာ အလုပ်သမားများထဲတွင် အမျိုးသမီး အလုပ်သမ ၁၂၀၀ ကျော်ရှိပြီး အမျိုးသား အလုပ်သမား ၁၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း၊ ယခုအထိ ဆန္ဒပြနေသည်မှာ ၁၄ ရက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျော်ဒန်နိုင်ငံတွင် မြန်မာသံရုံး မရှိ၍ အစ္စရေးနိုင်ငံရှိ မြန်မာ သံရုံးကို ဖုန်းဆက် အကူအညီ
ဝမ်ပေါင် နှင့် ဦးပုိုင်တို့ လက်ပန်းတောင်းကြေးနီးစီမံကိန်း ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ လယ်သမား မိဘပြည်သူတွေရဲ့ တိုက်ပွဲက မပြီးသေး ခရုိုနီ လက်ပါးစေ ပြည်သူရဲတွေ မအူပင် လယ်သမားတွေကို မုိုက်ကမ်းစွာ အကြမ်းဖက်သုံး၍ နိမ်နှင်းတာကြောင့် ရဲအချို့ ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရပြီး လယ်သမားများ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်ရသူကိုရနှင့် သေဆုံးသူတွေလည်း ရှိကြောင်း သတင်း တက်လာတော့ ဖားတပုိုင်း ငါးတပိုင်း ဗိုလ်ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို အလွန် ဒေါသထွက်မိပါသည်။
အခုလည်း တရုတ် က မြန်မာစစ်တပ် ကိုချီးမြှင့်တယ့် အနေနဲ့ လားတော့ မသိ စစ်သုံးကား အစီး ၆ဝဝ ကို ရောင်းပေး လိုက်ပါသည်။ မြန်မာအနေနှင့် အနောက်အုပ်စုနှင့် မည်မျှ ပေါင်းစီးဖို့ ကြိုးစားကြိုးစား အာဏာရှင် စရိုက် မပျောက်သေး ၍ ဇာတိအမှန် ပေါ်လာစမြဲပါ။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေနှင့် တဖွဲ့ ပြီးတဖွဲ့ အပေါ်ယံ အပစ်ရပ် စာချုပ် ချုပ်သယောင်နဲ့ တဖွဲ့ ချင်း ခွဲထုတ်ပြီး ပြန်တိုက်နေသည်ပင်။ ၂ဝ၁၂ က တည်းက ပြည်ထောင်စု အဆင့် အပစ်ရပ်ထားတဲ့ RCSS/SSA နှင့် လက်မှတ် ထိုးပြိးကတည်းက ယနေ့ ထိ
အခုလ၂၄ရက်နေ.က ကျောက်ပန်းတောင်းမြို.နယ် နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာ မှာ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရေး ကိစ္စနဲ. ပတ်သက်ပြီး ဒေသခံ ရွာသားတွေနဲ.ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်တွေအကြား အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခတချို. ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်ညိုမာသက် သတင်း ပေးပို.ထားပါတယ်။ (ရိုက်ကူး-ကိုတိုး/အာကာမင်း ICJ)
မအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု ယနေ့နံနက် မြင်ကွင်းများ
မအူပင် မြို့နယ် မလက်တိုကျေးရွာ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပြီးနောက် ဒဏ်ရာရရှိသည့် အမျိုးသမီးများ ဓာတ်ပုံ
ဓာတ်ပုံ - CJ Copy from - The Irrawaddy (Burmese Version)
ရိုက်နည်းသင်ပေးပြီး .... ထမင်းရှင် တောင်သူလယ်သမားတွေကို တကယ်စော်ကားလိုက်ကြပြီ
ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ရိခူးကျေးရွာတွင် KIA နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) ကြား စစ်ရေးတင်းမာမှုများ လျှော့သွားရန် ဆောင်ရွက်နေချိန် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာပြီး ယနေ့ နံနက် ပန်ဆိုင်း (Pangsai) မြို့ပတ်ဝန်းကျင် ရိခူး (Yi Hku) ကျေးရွာအနီးတွင် အစိုးရတပ်နှင့် KIA ပြည်သူ့စစ်တပ်ရင်း (MHH) တပ်ခွဲ (၅) တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
နံနက် ၁၀ ချိန်တွင် အစိုးရ တပ်အင်အား ၂၀၀ ခန့်ရှိသည့် အစိုးရ တပ်များသည် MHH (Mungshawa Hpyen Hpung) တပ်ဖွဲ့များ ရှိသည့် နေရာသို့ ရုတ်တရက်ဝင် ရောက်လာပြီး လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ် လာခြင်းကြောင့် နှစ်ဘက်တပ်မှ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု တပ်ခွဲ (၅) စစ်ဗိုလ်တဦး KNG ကချင်သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
ထိုအစိုးရတပ်များသည် ခလရ အမှတ် ၆၉၊ ခမရ ၂၄၂ တို့ ဖြစ်ပြီး MHH တပ်ခွဲ(၅)နှင့် နံနက်ပိုင်း နာရီဝက်အကြာ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရဘက်မှ ၂ ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး တရုတ်ဆေးရုံသို့ သယ်ဆောင် သွားကြောင်း MHH တပ်ခွဲ ၅ စစ်ဗိုလ်မှ ဆက်ဆိုသည်။ အစိုးရတပ်မှ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဧ။် မွန်အမျိုးသားနေ့ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ (ရုပ်/သံ)
လှူဒါန်းခဲ့သူ မန်းမြို့တော် ပေါက်စီ လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ သား မောင်ဘုန်းရှင်က ''သံဃာတော်တွေကို ဆက်လက် စောင့်ရှောက်ချင်တယ်။ ဖားအောက်တောရ အဓွန့်ရှည်ပြီး သာသနာဆက်လက် ပြန့်ပွားစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ ရှိတယ်''ဟု ပြောသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းက ယနေ့ လူငယ်များအနေဖြင့် သောက်စား ပျော်ပါး နေမှုများသည်ဟု ပြောဆိုနေကြမှု များ ရှိနေကြရာ ယခု အလှူဒါနမှာ
မအူပင် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲသည့် ကိစ္စရပ်အား လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသခံ ပြည်သူများက ရှုတ်ချကြောင်း ပြောဆို..။
မုံရွာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူမြို့နယ်၊ ပလောင်ကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေအငြင်ပွားသည့်ကိစ္စရပ်အား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် ၍ ဖြိုခွဲခဲ့သည့်အပေါ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာခရိုင် လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံပြည်သူများမှ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ယနေ့ ပြောကြားပါတယ်..။
“လက်နက်သုံးပြီး အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ ကိစ္စဟာ... ပြဿာနာကို ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်သလို ပြည်သူကိုလည်း အနိုင်ကျင့် စော်ကားရာ ရောက်ပါတယ်..” ဟု တုံကျေးရွာ သပိတ်စခန်းရှိ လက်ပံတောင်းတောင် အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှား သူ ဒေသခံတောင်သူ တစ်ဦးမှ ပြောပါတယ်..။
လယ်ယာမြေ သိမ်းဆီးခြင်းခံ တောင်သူများမှ မိမိပိုင်လယ်ယာမြေ ပြန်လည်ရ ရှိရေးအတွက် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုရာမှ ရဲဝန်ထမ်း များနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်၍ ဆန္ဒပြ လူ
??? ကူညီပါရစေ ကူညီပါရစေ ဆိုပြီး ရိုက်တော့မှာလါး ???
မအူပင်က လယ်သမားတွေကို ဘယ်လိုရိုက်ရမယ်ဆိုတာ သရုပ်ပြသင်ပေးနေတာပါတဲ့ဗျာ....မိုက်ရိုင်းချက်ကတော့ ကမ်းကုန်တယ်..ထိချင်တဲ့ နေရာထိပလေ့စေ ရိုက်သာရိုက်တဲ့
..ခါးမိ - ခါးရိုက် .... ဂေါင်းမိ -ဂေါင်းရိုက်... ခြေထောက်မိ - ခြေထောက်ရိုက်....
သမတဦးသိန်းစိန်တော့ မမျော်လင့်ဘဲ အငိုက်မိသွားတယ်။ သူတို့ သိတ်ရှက်သွား
သမတ တည်းမဲ့ ဟော်တယ်ရှေ့
သမတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ ဟော်တယ်ရှေ့မှာထိတ်တိုက် တိုးကြတယ်။
သမတ လူကြမ်းအဖွဲ့တွေနဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ ဟော်တယ်ရှေ့ ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်။ သမတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိမ်းက ဆန္ဒပြသူကိုယ်စားလှယ်၂ဦးကို ခေါ်တွေ့ ရှင်းလင်းတယ်။
Ko Nyo,(FB) သတင်းစာမျက်နှာမှ
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရိ ၂၆။
ယနေ့ ကျရောက်သော ၆၆ နှစ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ကို ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်တွင် ညနေ ၆ နာရီ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါ မွန်အမျိုးသားနေ့သို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေနှင့် အခြားတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
Photo by - The Hot News
အခမ်းအနားတွင် မွန်ဒေသဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက မွန်စာပေအား ကျောင်းပညာရေးတွင် ပါဝင်လာရေးအတွက် အဓိကထား ပြောဆိုခဲ့ပြီး မွန်တိုင်းရင်းသားများအတွက် ဖယ်ဒရယ်သည် ခွဲထွက်ရေး မူဝါဒ မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်လည်း အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်အား ဖော်ဆောင် ရာတွင် အစိုးရနှင့် ပြည်သူပူးပေါင်း ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး အစိုးရမှလည်း ပြည်သူ အားကိုးနိုင်သော အစိုးရဖြစ်စေရန်နှင့် ပြည်သူကလည်း အစိုးရအားကိုးနိုင်သော ပြည်သူများ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
သတင်းရင်းမြစ် - မြန်မာ့ခေတ်သတင်း
Posted by PNSjapan at 1:49 AM0comments
ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အဖွဲ့ (RCSS/SSA)အား ၄င်းတို့ တပ်စခန်း ၂ ခုမှ ဆုတ်ခွာသွားရန် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့တို့က ဖိ အားပေး တိုက်ခိုက် နေသည်ဟု အဖွဲ့၏ ပြောခွင့်ရသူ ဗိုလ်မှူး ဆိုင်းလောင်စိုင်းက ပြောပါသည်။
“ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ အခြေချ စစ်ဗျူဟာ တခုနားပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီနားမှာ ရှိတဲ့ မိုင်းထားမြို့နယ်ခွဲမှာ တနေရာ၊ ပြီးတော့ ဟိုမိန်မြို့နယ်ခွဲမှာ တနေရာ အဲဒီက ကျနော်တို့ စခန်း၂ခုကို ရုပ်သိမ်း ပေးဖို့ မိုင်းထား ဗျူဟာမှူးက ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ မှာ စာဖြင့် အကြောင်းကြား ထားတယ်။ နှုတ်ဖြင့်နဲ့လဲ ပြောလာတယ်။ ပြော ပြီးတာနဲ့ နောက်နေ့ ဖေေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ တပ်အင်အားနဲ့ လာပြီး စတင် တိုက်ခိုက် တော့တာပါဘဲ။” ဟု ဆိုပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီက၂၅ ရက်နေ့တွင် အစိုးရ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခလရ ၆၆ တပ်ဖွဲ့တို့သည် ခို လံ မြို့နယ်ခွဲ ခိုအွတ် ကျေးရွာသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ နံနက် ၁၀ နာရီခွဲ အချိန်တွင်
Posted by PNSjapan at 1:25 AM0comments
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက လာမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်အဖြစ် ငွေကျပ်ဘီလီယံ တထောင်ကျော် တောင်းခံ ထားသည့်အနက်မှ စစ်လက်နက်၊ လေယာဉ်၊ သင်္ဘောများနှင့် တပ်မတော် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံများ၏ စက်ကိရိယာများအတွက် ကျပ်ဘီလီယံ ၆၀၀ နီးပါး အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီက ရရှိထားသော ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် စာရင်းဇယား အရ သိရှိရသည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်အဖြစ် ငွေကျပ် ၁၀၆၇ ဒသမ ၃၇ ဘီလီယံ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်းများအတွက် ငွေကျပ် ၄၉၂ ဒသမ ၉၈ ဘီလီယံ အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကာ လက်နက်၊ လေယာဉ်၊ သင်္ဘောများအပါအ၀င်
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒတ်စမွန်တူးတူးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ...
မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ တောင်အာဖရိက ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒတ်စမွန်တူးတူးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ဟာ ဒီကနေ့ညနေ ၃ နာရီ အချိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။
အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ် ရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ဒတ်စမွန်တူးတူးဟာ တောင်အာဖရိက အသားအရောင် ခွဲခြားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကာလအတွင်း အကြမ်းမဖက်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ
Needs of Ethnic Conference in Myanmar
Copy from -Jade Land
မြန်မာပြည်က သစ်တောတွေ "မြန်နှုန်းမြင့် ပျက်စီးပြုန်းတီးနေ" တယ်လို့ ဒီကနေ့ ကြေးမုံသတင်းစာ ဆောင်းပါး တပုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။
(မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီမှာ ဖတ်ပါ)
ရန်ကုန်-မန္တလေး မိုင်လေးရာခန့် အကွာအဝေးမှာ နားခိုစရာအရိပ် မရှိ၊ သစ်တော ပြောင်တလင်းခါ နေတယ်လို့ ဆောင်းပါးကို အစချီ ရေးထားပါတယ်။
၂ဝ၁၁ မှာ နိုင်ငံရဲ့ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု ၄၉ % ရှိခဲ့တယ်၊ တနှစ်အကြာမှာ ၉ % ကျဆင်းသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် သစ်တော သစ်ပင် လုံးဝ မခုတ်ရ ဆိုမည့် ဥပဒေမှာ ခုတ်စရာမရှိတော့၍ အလိုအလျောက် တည်မည့်သဘောရှိနေပါသည်" လို့ ဆောင်းပါးမှာ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ လနှောင်းပိုင်းအတွင်း သျှမ်းပြည် တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲ အကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားရာမှာ အစိုးရတပ် ဘက် အယောက် သုံးဆယ်ထက်မနည်း သေဆုံးကြောင်း နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောပါသည်။
"တိုက်ပွဲကတော ၂၂ ရက်နေ့တုန်းက တော်တော် ပြင်းထန်တယ်။၂၃ ရက်နေ့တုန်းကတော့ ဒဏ်ရာရတဲ့ လူတွေနဲ့ အလောင်းတွေကို ပြန်ကောက်ကြတယ်လေ။ ဗမာတပ်ဘက်က အယောက်သုံးဆယ် ထက် မနည်းသေတယ်" - ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် ဒေသအတွင်း ပြည်သူ့စစ် ခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောပါသည်။
၂၄ ရက်နေ့က လွယ်နိုင်းရွာဘက်သို့ မြန်မာ စစ်တပ်မှ ပစ်သော ၆၀ မမ လက်နက်ကြီးမှာ မပေါက်ကွဲ ရှိနေရာ၊ ညပိုင်း ရွာသားများ ယာမီးရှို့စဉ် အဆိုပါကျည် မီးလောင်ကျွမ်း ပေါက်ကွဲသဖြင့် ထိုည၌ မြန်မာစစ်တပ် ဘက်မှ တဘက်တည်း တညလုံး ဒရစပ်ပစ်ခတ် နေကြောင်း ရွာသားများ ပြောပြချက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ကိုယ်စားလှယ်များ ယနေ့နံနက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာ
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အတောက်အကူ ပြုနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) မှ ဦးဘိုသောင်း (ဥက္ကဌ/အဖွဲခေါင်းဆောင်)၊ ဒေါက်တာအေးကျော် (ဒုဥက္ကဌ/ဒုအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်)၊ ဦးမြင့်သိဏ်း (အတွင်းရေးမှူး /ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)၊ ရဲဘော်ထွန်းအောင်ကျော်(အလုပ်အမှုဆောင် မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ) တို့ခေါင်းဆောင်းပြီး နိုင်ငံတကာဌာနခွဲမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း(၁၀)ဦး ပါဝင်သည့် အဖွဲသည် ယနေ့နံနက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှ တဆင့် မြဝတီ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်ခွာလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သတင်း/ဓာတ်ပုံကိုဇော်သူရ ( မဲဆောက် )
နေပြည်တော်တွင် ရွှေကြော ရှာဖွေတွေ့ ရှိကြောင်း သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်အောင်က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
Copy from - Don Nyo Gyi,(FB)
ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူများအား သိန်းစိန်စစ်တပ်မှ ဗုံးထောင်ကြိုဆို
ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူ။ ဆောင်ရွက်သူများအား အစိုးရစစ်တပ်မှ မိုင်းထောင်လုပ်ကြံ
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနှင့် မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော ဗမာအစိုးရစစ်တပ်သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားကြောင်း/သည် ဟုဆိုကာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ များ ပြုလုပ် နေသော်လည်း ဤ အချက်သည် နိုင်ငံတကာ နှင့် အများပြည်သူများ အား လိမ်ညာ လည့်ဖျားနေ ခြင်းတာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ဤဗီဒီယိုဖိုင် က ပိုမိုပေါ်လွင် (ထင်ရှား) အောင် သက်သေပြလိုက်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားသူ (ဆောင်ရွက်သူ)၊ လက်နက်မဲ့ (ဗမာလူမျိုး) ပြည်သူတွေ (ကိုနေမျိုးဇင် တို့ အဖွဲ့)တွေ ကိုတောင် ဒီလို မိုင်းထောင်(လုပ်ကြံ)တယ်ဆိုတော့ ဒေသခံ ကချင် ရွာသားတွေကို အဲ့ဒီ ဦးသိန်းစိန်စစ်တပ် က ဘယ်လိုဆက်ဆံ မယ်ဆိုတာ ကိုတော့ တွေး တောင် မတွေးဝံ့ စရာ....။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆောင်ရွက်သူတွေ ကို ဒီလိုမိုင်းထာင် လုပ်ကြံတဲ့ အစိုးရရဲ့ ပါးစပ်က ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားပါတယ် ဆောင်ရွက်နေပါတယ် လို့ထွက် တဲ့(တဖွဖွပြောနေတဲ့) စကားကို ဘယ်အချက် ကိုထောက်ပြီး ယုံကြည်ရမှာ လဲ......????????
ပီတိ အခမဲ့ဆေးခန်းမှ မျက်ရည်ဝဲစရာ ကောင်းလောက်အောင် ပီတိလည်းဖြစ် သနားစရာလည်း ဖြစ်ရမယ့် မွေးရကျိုးနပ်မယ့် ကလေးတစ်ယောက် အကြောင်း
အများအားဖြင့် မိဘမေတ္တာကိုဘဲ စာဖွဲ့ဖြစ်ကြတာ များပါတယ်။ ခလေးငယ်တို့ရဲ့ မိဘအပေါ် တွယ်တာ မြတ်နိုးမှု့ ကတော့ ထင်သာမြင်သာ မရှိပေမယ့် တွေ့တွေ့နေရပါတယ် အဲ့ဒီအထဲက တစ်ခုပါ ။ မိခင်အပေါ် သိပ်အလိုက်သိရှာတဲ့ ခလေး တစ်ယောက်ပါ ။
ပါတ်ဝန်းကျင် ချစ်အောင်လဲ နေတတ်ပါတယ် ဆေးခန်းကို သူတို့သားအမိ ရောက်လာတိုင်း လမ်းစရိတ်တောင် ပြည့်စုံအောင် ပါမလာနိုင်ပါဘူး ။ လိုအပ်လို့ ပုလင်းချိတ် ရတော့မယ်ဆို အနည်းဆုံး သုံးနာရီလောက် ကြာတတ်ပါတယ် ။ ပုလင်းချိတ်ထားရတဲ့ မိခင်အပေါ့အလေး ကိစ္စကစ ဂရုတစ်စိုက် ပြုစုနေတဲ့ ခလေးကို ပါတ်ဝန်းကျင်က ဘဝတူလူနာတွေ သူနာပြုတွေက သတိထား မိလာတော့ ခလေးကို သနားစိတ် ဝင်လာပြီး ခလေးတွက် မုန့်လေးတွေ အစာပြေစားစရာလေးတွေ တတ်နိုင်သလောက် ပေးကြေ ကျွးကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ခလေးအနေနဲ့ သူကိုယ်တိုင် ဆာလောင်နေပေမယ့် သူ့မိခင် နိုးလာတဲ့အထိ ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်ဆိုင်းနေပြီး အမေဗိုက်ဆာမှာ စိုးလို့ ဆိုပြီး အမေ့ကို တယုတယခွံ့ကျွေးပြီး ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုမှ စားတတ်တဲ့ ခလေးတစ်ယောက်ကို `ပီတိ´အခမဲ့ ဆေးခန်းရဲ့ နေ့ရက်တွေထဲမှာ သတိတယ မှတ်မိနေပါတယ် ။
From:[_ Piti Charity Dispensary _]
ဖြူးမြို့ အနီးတွင် ခေါင်းဖြတ်အသတ် ခံရသော အမျိုးသမီးကို မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုသည့် သတင်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိပဲ စုံစမ်းနေဆဲသာ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ် ၊ မှူခင်းဌာနမှ ဒုတိယ ရဲမှူးကြီး တစ်ဦး က ပြောကြားသည်။
ချစ်သူများနေ့တွင် လည်လှီး အသတ်ခံရသော မိန်းကလေးမှာ မြိတ်မြို့မှ ဖြစ်ကြောင်း facebook လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ တွင် ပျံ့ နှံနေခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြု မေးမြန်းရာတွင် ဒုတိယ ရဲမှူးကြီး က အထက်ပါ အတိုင်းပြောကြားသည်။
“ခုထက်ထိ လူသတ် တရားခံကို မပြောနဲ့ သေသူရဲ့ အမည်ကို တောင် စုံစမ်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ သေချာတာ ကတော့ တရားခံကို မမိ သေးပါဘူး” ဟု ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက် နံနက် ၁၁
ဆင်းရဲတဲ့ တိုင်းပြည်တော်တော်များများဟာ ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်ကို အမြင့်ဆုံး သုံးစွဲကြတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဆင်းရဲတွင်းက မတက်နိုင်ကြဘူး။
Ter Tee ,အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ
Posted by PNSjapan at 9:08 AM0comments
(၁၉၆၃ - ၁၉၉၄) ကာလ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှု ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေ ပြန်ဖတ်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
Memoir: Kachin Peace Efforts (1963 - 1994)
Memoir - Kachin Peace Efforts by
Copy from - ngunjawa
"အစ်ကိုကြီးရေ.. သတင်းထူးပါတယ်၊ သတင်းထူး" လို့ အော်ပြီး မနက်စောစောကြီး ရောက်လာသူ ကတော့ တပည့်ကျော် မောင်ဆိတ်သိုးပေါ့ခင်ဗျာ။
"မင်းကလည်းကွာ၊ အခုမှ အိပ်ရာထစ ရှိသေးတယ်။ ငါက ကျန်းမာရေး ဂျာနယ်ထုတ်တာ။ ဘာ သတင်းထူးမှ မလိုဘူး။ သတင်းဂျာနယ်တွေသာ အဲဒီ မင်းသတင်းထူးသွားပေးလိုက်"ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ မောင်ဆိတ်သိုးက မျက်နှာငယ်လေးနဲ့
"ဒီသတင်းက အစ်ကိုကြီးလက်နဲ့ရေးမှ ရမှာ။ သတင်း ဂျာနယ်တွေသွားပေးရင် ထူးမခြားနား ဇာတ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ အားကိုးတကြီးလာခဲ့တာ။ ပြီးတော့ဒီကိစ္စက အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးကို စော်ကားတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်နေလို့" အဲဒီလို မောင်ဆိတ်သိုးပါးစပ်က မပြောစဖူး ပြောလိုက်တော့ မာဂျေလည်း မျက်စိကျယ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ "ကဲ ဆိုစမ်းပါဦး၊ မင်းရဲ့ကိုယ့်လူမျိုးကိုစော်ကားခံရတဲ့ကိစ္စကြီး။ ငါတို့လူမျိုးက အစော်ကားခံနေ ရတာကြာပါပြီ"
"ဒီလိုဗျ၊ အခု ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲကို နိုင်ငံခြားသားတွေ အတော်လာကြတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကိုရီးယားတွေ၊ ယိုးဒယား တွေ၊ ဂျပန်တွေက မဟုတ်မဟတ်တွေ လုပ်နေတာတွေ့လို့။ သူတို့က ဒီမှာ အိမ်ကြီးကြီး တစ်လုံး ငှားတယ်ဗျာ။ ပြီးရင် သူတို့ဆီကလာတဲ့ တိုးရစ်တွေအတွက် အခန်းတွေ ဖွဲ့ပြီး ငှားစားတယ်။ သူတို့ရုံး က သူတို့လူမျိုးစကားပြန်နဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှောက်လည်တယ်ဗျာ။ သူတို့လူမျိုး ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ စားတယ်။ နောက်ဆုံးမတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သူတို့ ယိုခဲ့တာတွေပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ်"
"အဲဒါက ဟိုတယ်ခရီးတို့၊ အခွန်ဦးစီးတို့၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံးတို့နဲ့ ဆိုင်တယ် ထင်တာပဲ။ ပြည်တွင်းက တိုးဂိုက်လို့ ခေါ်တဲ့ ခရီးသွားလမ်းညွှန်တွေကိုတော့ ဟိုလိုမ၀တ်ရ၊ ဒီလိုမ၀တ်ရ၊ ဟိုအခွန်ဆောင်၊ ဒီစည်းကမ်း လိုက်နာနဲ့၊ ပြည်ပကနေ ပြည်တွင်းကို တရားမ၀င် လာလုပ်နေ တဲ့သူတွေကိုတော့ ဖမ်းဖို့ ဆီးဖို့၊ အရေးယူဖို့ ဘာဥပဒေမှမရှိဘူး ထင်ပါတယ်ကွာ။ ဗိုလ်တထောင်ဘိုးဘိုးကြီးနတ်ကွန်းမှာ ယိုးဒယား တိုးဂိုက်က သူ့လူမျိုးတွေကို ဘိုးဘိုးကြီးပွဲတင်ပေးနေတာတောင် ငါ တွေ့ဖူးတယ်။ အောင်မယ် တာဝန်ကျ
Posted by PNSjapan at 8:36 AM0comments
သျှမ်းပြည်အတွင်း သမတဦးသိန်းစိန် အစိုးရတပ်၏ ထိုးစစ်ကို SSA/SSPP တပ်ဖွဲ့ ခုခံဆင်နွဲ
Copy from -Chrry Tai
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၁) တပ်ရင်း(၁၀) ချီဖွေ-လော့ခေါင်ဒေသ တွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ(၁) တပ်ရင်း(၁၀) စခန်းထိုင်သော လောခေါင်ကုန်းကို မြန်မာ့တပ်မတော်အ င်အား(၄၀၀)နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ ပြည်သူ့စစ် အင်အား(၃၀၀)ခန့် စုစုပေါင်း အင်အား (၇၀၀)ခန့်ဖြင့် ဒီမနက် ၁၀ နာရီကျော်မှ စတင်ပြီး ထိုးစစ်ဆင်နေသည်။ ယခုအချိန်ထိ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လော့ခေါင်ခရိုင် မှော်ဂျော်ကျေးရွာ မှ ရွာသူရွာသား ၁၀၀ ခန့် မှာ မြန်မာအစိုးရ တပ်များ ရွာအတွင်းသို့လက်နက်ကြီး ၆၀ မမ များဖြင့် ပစ်ထည့် နေသောကြောင့် ဘေးလွတ်ရာသို့ ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်ပြေး
Posted by PNSjapan at 12:55 AM0comments
KIO စစ်ဌာနချုပ်တည်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့အနီးက ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကို တွေ့ရစဉ်
Photo : RFA/ Nyein Nyein Pyae
လိုင်ဇာမြို့အ၀င် မိုးနဲချောင်းကို ဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့ တံတားအနီးမှာ ကေအိုင်အေတပ်တွေက ထောင်ထားတဲ့ မိုင်းတွေရှိတာကြောင့် အဲဒီတ၀ိုက်မှာရှိတဲ့ အစိုးရတပ် ခလရ ၂၄၀ က လုံခြုံရေးတာဝန် မယူပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကေအိုင်အိုအဖွဲ့က အဲဒီနေရာမှာ သူတို့ထောင်ထားတဲ့ မိုင်းတွေမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုပါတယ်။
လှည့်ပြန်သွားတဲ့ ICRC ကား ၃ စီးမှာ နိုင်ငံခြားသား ၃ ဦးအပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၉ ဦးပါတယ်လို့သိရပြီး၊ အခုလို ICRC ကားတွေ လှည့်ပြန်သွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်အခြေစိုက် ICRC ရုံးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ဒီကနေ့ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တာကြောင့် ဖြေကြားခွင့်ရှိသူတွေ ရုံးကိုမလာကြောင်း ပြောပါတယ်။
ထိုစာပိုဒ်လေးအား ယနေ့ နေပြည်တော်သို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)အတွက် တင်သွင်းထားသော အရေးပေါ်လူနာ တင်ယာဉ် ထုတ်ယူရေး ကိစ္စရပ်အတွက် မသွားရောက်မီ ကိုပန်းသီးမှ ကျွန်တော့်အား ပေးထားခဲ့သော ရေးလက်စ စာပိုဒ်ကလေးပင် ဖြစ်တော့သည်။ ယင်းစာပိုဒ်မှာ - ‘မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိုးနည်း ရေရှားပါးသော ဒေသများတွင် နှစ်စဉ် မြွေကိုက်ခံ ရသော လူနာအရေအတွက်မှာ
Ads.com.mm မှ တွေ့လိုက်လို့ပါ။ ပေါ်တူဂီတို့ မြန်မာပြည်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်စဉ် နှစ်မြှုပ်ခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီ သင်္ဘောမှ ရရှိခဲ့ ဒင်္ဂါးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ခေတ်ကာလက ၁၆ ရာစု (၁၈၆၈ ခုနှစ် ဝန်းကျင်) ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ ကာလပေါက်ဈေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄.၂ သန်းနဲ့ ဝယ်ယူလိုသူ များ ရှိနေပြီး ကမ္ဘာ့ရှားပါး ဒင်္ဂါးလို့ဆိုပါတယ်။ ဒင်္ဂါးဆိုလို့ သေးသေးလေး မဟုတ်ပါဘူး။ လက်တစ်ဖဝါးစာ မကကြီးပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့
Posted by PNSjapan at 9:54 PM0comments
အိန္ဒိယ မူး​ယစ်​ဆေး​ဝါး​မိမှု စစ်တပ်အရာရှိကြီး​ပါ ဖမ်း​မိ
မြန်မာပြည်ကို ​ရောင်း​ချမယ့်​ အိန္ဒိယရူပီး​ငွေ သန်း​ ၁၅၀ တန်ဖိုး​ရှိ မူး​ယစ်​ဆေး​ဝါး​တွေ ဖမ်း​ဆီး ​ခံရမှုမှာ အိန္ဒိယ စစ်တပ်က ဒုတိယဗိုလ်မှူး​ကြီး​တဦး​ ပါဝင်​နေပါတယ်။
အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်မှာ ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်​နေ့​ နံနက်ပိုင်း​က ဖြစ်ပွား​ခဲ့​တဲ့​ မှုး​ယစ်​ဆေး​ဝါး​ ဖမ်း​ဆီး​မှုမှာ အိန္ဒိယ စစ်တပ်က ဒုတိယဗိုလ်မှူး​ကြီး​တဦး​ ပါဝင်​နေမှုကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဏိပူရပြည်နယ် ရုပ်မြင်သံကြား​နဲ့​ သတင်း​စာ​တွေမှာ တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ သတင်း​အ​နေနဲ့​ သတင်း​ခေါင်း​ကြီး​ပိုင်း​တွေမှာ ​ဖော်ပြခဲ့​ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယ - မြန်မာနယ်စပ်က မို​ရေး​မြို့​ကို ​မောင်း​နှင်လာတဲ့​ ကား​ ၃ စီး​ကို မဏိပူရပြည်နယ် ​ထောင်ဘား​ခရိုင်က ပါလဲမြို့​ စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ်ကို ဖြတ်အပြီး​မှာ မဏိပူရပြည်နယ် ကွန်မန်ဒို ရဲအဖွဲ့​က လိုက်လံ ဖမ်း​ဆီး​ရရှိလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကား​ ၃ စီး​ထဲမှာ အိန္ဒိယ ရူပီး​ငွေ သန်း​ ၁၅၀ တန်ဖိုး​ရှိတဲ့​ အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် စီဒို အက်ဖီဒမင်း​ ဟိုက်ဒိုကလိုရိုက် မူး​ယစ်​ဆေး​တွေကို ဖမ်း​ဆီး​ ရရှိခဲ့​တာပါ။ အိန္ဒိယ​ငွေ ၁ ရူပီး​ဟာ မြန်မာ​ငွေ ၁၆ ကျပ်နီး​ပါး​နဲ့​ ညီမ်ွပါတယ်။ ဒုတိယဗိုလ်မှူး​ကြီး​ အာ​ဂျေး​ကျောင်သရီး​ စီး​နင်း​လာတဲ့​ ​ဘော်လီယို ကား​အဖြူ​ပေါ်မှာ Govern of India Ministry of Defense ဆိုတဲ့​ စာတမ်း​နဲ့​အတူ အချက်ပြ မီး​နီကို တင်​ဆောင်​မောင်း​
မြန်မာအစိုးရ စစ်သား(၁၀)ဦး ငြိမ်းချမ်းရေး လိုလားကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော် ပြသတဲ့အနေဖြင့် ဗုံးဖောက်ခွဲ၍ သတ်သေ။ အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် မလိုလားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို တွေ့ရှိ သောကြောင့် ဒေါ့ဖုန်းယန် နှင့် လွယ်မောက်ယန် အကြား ခလားတောင်ခြေတွင် တပ်စွဲထားသော ခမရ-၃၈၉, ခမရ-၂၃၇, ခလရ- ၇၄ မှ ရဲဘော်(၁၀)သည် အောက်ခြေ ရဲဘော်များ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားကြောင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်သည့် အနေဖြင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၄)ရက်နေ့မှာ ဗုံးဖောက် သတ်သေ သွားခဲ့ကြသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကို ဘေးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တဦးက ရွာထဲမှာ အရက်လာသောက်ရင်း အခုလို ပြောခဲ့ပါတယ်။
" သူတို့ ဗုံးမဖောက်ခင်ေ ပြာတာက ပြည်သူလူထုနဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေတောင် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နေတာ အစိုးရက ဘာလို့ မလိုက်လျောတာလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ငါတို့ အောက်ခြေ ရဲဘော်အနေနဲ့ လိုလားကြောင်း ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် သတ်မယ်ဆိုပြီး ဗုံးကြီးကို အလယ်မှာထား ၀ိုင်း ထိုင်းပြီး မနက်ပိုင်း မှာ ဖောက်ခွဲ လိုက်တာ ၃၈၉ ,၂၃၇ ,က(၉)ယောက် ၇၄ ,က (၁)ယောက် စုစုပေါင်း
Posted by PNSjapan at 9:04 PM0comments
နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေ ၀ယ်ယူဖို့အတွက် ကျပ်ငွေ ၁၈ ဘီလီယံဖိုး သုံးမယ့်အပေါ် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်
ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ သူက အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း နောက်ဆုံးပေါ်ကားသစ်တွေ ၀ယ်ဖို့အတွက် ကျပ် ၁၀ ဘီလီယံနဲ့ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော် သုံးခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ လွှတ်တော် အမတ်တွေကတော့ တနေ့ ကျပ် ၅၀၀ ပေးပြီး ဘတ်စ်ကားနဲ့ လွှတ်တော် တက်နေရကြောင်း၊ သူတို့လွှတ်တော်အမတ် ၆၆၀ ကျော်ကို သိန်း ၁၀၀ တန်ကား ၀ယ်ပေးမယ် ဆိုရင်တောင် ကျပ် သန်း ၆ ထောင်ကျော်ပဲ ကုန်မှာ ဖြစ်ကြောင်း နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီအတွက် အစိုးရ ကားဝယ်မယ့် ဘတ်ဂျက်ကို တ၀က်လောက် ဖြတ်တောက် သင့်တယ်ဆိုပြီး သူက မှတ်ချက် ပေးခဲ့ပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်စွာ ဆက်ဖြစ်နေတုန်းမို့ အစိုးရက ကမ်းလှမ်းထားသလို ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လက် ကျင်းပဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်...
အစိုးရတပ်နဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် ကေအိုင်အေကြား ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်စွာ ဆက်ဖြစ်နေတုန်းမို့ အစိုးရက ကမ်းလှမ်းထားသလို ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လက် ကျင်းပဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဆက်လုပ်သွားမှာပါလို့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ ကေအိုင်အိုရဲ့ တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးနဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးလာနန်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို နားဆင် နိုင်ကြပါတယ်။
Copy from - myohtet8
Posted by PNSjapan at 4:23 PM0comments
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ သမ္မတသစ်ရဲ့ တာဝန်စတင်မှုကို ကြေညာတဲ့ ခေါင်းလောင်းထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ညသန်းခေါင်ချိန်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးလ်မြို့လယ်က ဧရာမ ရှေးဟောင်း ခေါင်းလောင်းကြီးရှိတဲ့ ဖိုရှင်ဂန် (Bosingak) အဆောက်အဦးမှာ သမ္မတသစ် ဘက်ဂွန်ဟေး (Park Guen-hye) က တာဝန် လွှဲပြောင်းယူတဲ့ အထိန်းအမှတ် ခေါင်းလောင်းထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲ အခမ်းအနားကိုတော့ တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပွဲအတွက်လည်း လုံခြုံရေး အပါအဝင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်မှုတွေကို လုပ်နေကြပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး အမျိုးသမီးသမ္မတ ဖြစ်မယ့် ဘက်ဂွန်ဟေး ရဲ့ နိုင်ငံရေး အမြင်ကို ထင်ဟပ်စေမယ့် အခမ်းအနား
နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ယိုဟေးအီဆာဆာကာဝါ နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို ကူညီထောက်ပံ့မည့် စီမံချက်များ၊ ကချင်၊ ကရင်ကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များနေထိုင်ရာ ဒေသများကို ကူညီမည့် အကြောင်းအရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ The Voice Weekly က ဘားအံမြို့ တွင် နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား များ၏ လူမှုဖူလုံရေး ဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ချစ်ကြည်ရေး သံအမတ်ကြီး ယိုဟေးအီဆာဆာကာဝါနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားသည် များကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်သည်။
Voice : နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းက နိုင်ငံ ၁၀၀ ကျော်လောက်ကို ကူညီနေတာ ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အရင်ကထက် ကူညီမှုတွေ ပိုပေးဖို့ရှိလား။
နီပွန်ဥက္ကဋ္ဌ : အခု နိုင်ငံတကာကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ထောက်ပံ့မှုတွေကို လေ့လာ ကြည့်မယ် ဆိုရင် ၂ဝ၁ဝ ထက် ၂ဝ၁၂ ကကူညီမှုတွေ ပိုများလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ က ထောက်ပံ့မှုတွေ ပိုများလာမှာပါ။
Voice : အဲဒီလို ကူညီတဲ့အခါ စစ်ပွဲကြောင့် ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ရတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ကူညီဖို့ရှိလား။ ဥပမာ - ကချင်ပြည်နယ်လို မျိုးပေါ့။
နီပွန်ဥက္ကဋ္ဌ : ရှေ့ဆက်လုပ်မယ့် Project အနေနဲ့ ၂၀ လောက်ရှိပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် စစ်ပွဲတွေနဲ့ မငြိမ်းချမ်း သေးတဲ့ နေရာတွေအားလုံးကို သွားပြီး တော့ အကုန်လုံးကို ထောက်ပံ့ဖို့ ကူညီ သွားဖို့
Posted by PNSjapan at 4:09 PM0comments
တရုတ်ပြည် ယူနန်ခရိုင် ကချင်မျိုးနွယ်စုများ၏ အကြီးကျယ်ဆုံး အခမ်းနားဆုံး မန်ရှီမနောပွဲတော် ကြီးအား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပ
Yunan Mungdaw Mang Shi Manau Poi Kaba ( 24-25.02.2013)
တရုတ်ပြည် ယူနန်ခရိုင် ကချင်မျိုးနွယ်စုများ၏ အကြီးကျယ်ဆုံး အခမ်းနားဆုံး မန်ရှီမနောပွဲတော် ကြီးအား စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနေစဉ် ။ အဆိုပါ မနောပွဲတော်အား ရွှေလီ ၊ ကူမင်း ၊ ဂျန်ခေါင် ၊ ယင်ဂျန်း၊လိုင်ဇာ နှင့် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ကချင်မျိုးနွယ်စုများ ၀င်ရောက်ဆင်နွဲလျက်ရှိပြီး နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း မပျက်မကွက် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသော ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ယခုနှစ်တွင် လူပေါင်း ငါးထောင်ကျော် ၀င်ရောက် ဆင်နွဲလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
သီးလေးသီးမှ လူရွှင်တော် ပန်းသီး ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်သူများအား သီးသန့် လာရောက်ဖျော်ဖြေ
ရန်ကုန်မြို့မှ လိုင်ဇာမြို့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေး အလံစိုက်ထူရန် ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဖက်လမ်းမှ လိုင်ဇာမြို့ဆီသို့ လမ်းလျှောက် ချီတက်လာသော ကိုရန်နိုင်စိုး ဦးဆောင်သည့် သံဃာ(၁၅)ပါး၊ သီလရှင်(၁)ပါး၊ အမျိုးသား(၇၀)နှင့် အမျိုးသမီး(၁၅)ယောက်၊ စုစုပေါင်း(၁၁၁)ဦး ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်၊ နဘားကျေးရွာသို့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄ ရက်၊ နံနက်(၁၀)နာရီခွဲ အချိန်တွင် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
နဘားတွင် "နဘားဘူတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်"၌ ဆရာတော် ဦးနန္ဒိယမှ တစ်ရက်တာ နားနေရန် စီစဉ်ပေးထားပြီး ထိုနားနေချိန်တွင် သီးလေးသီး အငြိမ့်အဖွဲ့မှ ပန်းသီး၊ မင်းသမီး ဆောင်းဝတီ နှင့် keyboard player ကိုမင်းသူတို့ (၃)ဦးက လမ်းလျှောက်သူ ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတို့အား အပန်းပြေရန်အတွက် စေတနာသက်သက်ဖြင့် လာရောက်ကာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက် အားပေးခဲ့သည်။
ဖျော်ဖြေပွဲကို နေ့လည်(၁)နာရီခွဲတွင် နဘားဒေသခံ ကချင်ရိုးရာ အကအဖွဲ့ဖြင့် စတင်ဖျော်ဖြေပြီး နေ့လည်(၂)နာရီခွဲ အချိန်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့မှ လူငယ်မောင်မယ်များက hollow ဂစ်တာ
ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ၏ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေး အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁/၂၀၁၃)
Posted by PNSjapan at 8:49 AM0comments
ဖက်ဒရယ် စနစ်ဆိုတာ တင့်သင့်မျှတတဲ့ အာဏာ ခွဲဝေရေးသာ ဖြစ်တယ်၊ ခွဲထွက်ရေး မဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာမှာ ဖက်ဒရယ် စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတိုင်း ငြိမ်းချမ်းပြီး၊ လူနေမှုဘ၀ စိတ်ချ လုံခြုံမှု ရနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ငွေကြေးချမ်းသာခြင်း ဆိုတာက တမျိုးပါ။ နယ်မြေဒေသ အကြောင်းကြောင့် ငွေကြေးချမ်းသာမှုကို ရနိုင်သော်လည်း၊ လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ လူနေမှုဘ၀ စိတ်ချလုံခြုံခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်ဘွယ်ေ ကာင်းခြင်း၊ စိတ်ချသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုင်ဆိုင်လာခြင်း၊ ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်ခွင့် စိတ်ချရခြင်း၊ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့် စသည်များမှာ ငွေကြေးချမ်းသာ ခြင်းနဲ့ မတူပါ။ စနစ်ကောင်းရင် ပြည်သူတွေ စိတ်ချမ်းသာမည်။ ပြည်သူတွေ စိတ်ချမ်းသာရင် တော်လှန် ပုန်ကန်စရာ မလိုတော့ပါ။
စင်ကာပူ ချမ်းသာခြင်းသည် အုပ်ချုပ်သူများ စည်းစနစ် ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်လို့ ဆိုနိုင်သော်လည်း သူ့ရဲ့ ပထ၀ီ အနေအထားမှာ များစွာ မူတည်နေပါတယ်။ မလကာ ရေလက်ကြားမှာ ဂိတ်မှူးဖြစ်နေတဲ့ မြို့လေးမို့၊ အလိုလို ရွှေလမ်း၊ ငွေလမ်း ပေါက်နေတယ် လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စင်ကာပူ တဖက်ကမ်း နီးနီးလေးမှာ ရှိတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ကျွန်းလဲ ရှိနေသော်လည်း၊ နိုင်ငံတကာ သင်္ဘောတွေ ဘာလို့ မ၀င်သလဲ၊ ဆိုတော့ စည်းစနစ် ရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချရမှုက ကွာသွားပြန်တယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတခု ကြီးပွါးတိုးတက်ဖို့ ဆိုသည်မှာ အဲဒီနိုင်ငံကို လည်ပတ် စေတဲ့ စက်ခေါင်း ဖြစ်တဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ စနစ်တခု ကောင်းမွန်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။
ဖက်ဒရယ် စနစ်သည် မလေးရှားကို ကြီးပွါးတိုးတက်ခြင်းများ ဆောင်ကျင်းပေး သလို၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကိုလဲ စူပါ ပါဝါ နိုင်ငံ ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ ပေးသည်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲခြင်းမှာ ဖက်ဒရယ် အတုအယောင် ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်လို့ နာမည်တပ်ထားသော်လည်း၊
UNFC နဲ့ အစိုးရတို့ရဲ့ ချင်းမိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ( ရုပ်/သံ)
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) နဲ့ အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ကြိုတင် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Copy from - irrawaddy.org/
Posted by PNSjapan at 1:20 AM0comments
ရှင်ဂျုဂု ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမည့် အစီအစဉ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ အောက်ပါလိပ်စာအတိုင်း တက်ရောက်နားထောင်နိုင်ကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်။
ဘုရားကို ရွှေသင်္ကန်း ကပ် မိ၍ ဘုရားပေါ်တွင် ဓါးဖြင့်ထိုးသတ်မှု
၁၄.၂.၂၀၁၃ နေက နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များနှင့် သွားလာရင်း အင်းလေးကန်အတွင်းရှိ ဖောင်တော်ဦးဘုရားသို့ ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရောက်သွားချိန်တွင် ဘုရားရင်ပြင်တော်ရှေ.တွင်လူတို့ ရုံးစုရုံးစုနှင်. ဖြစ်နေကြပါသည် ။ ဘာဖြစ်သလဲဟု အကျိုးအကြောင်း မေးကြည်.ရာ ဖြစ်တောင်.ဖြစ်ခဲ ဖောင်တော်ဦးဘုရားပေါ်၌ ဓါးထိုးမှု ဖြစ်ပွားသည်ဟု သိရ၍ အလွန်အံ.သြသွားပါသည် ။
အေးချမ်းလှသော အင်းလေးဒေသတွင် မဖြစ်စဖူး ထူးကဲလှပါဘိသည် ဟုအောက်မေ.ကာ ဖြစ်စဉ်ကို မေးတော. ပို၍ အံ.သြ ရပါသည်။ ဓါးနှင်. အထိုးခံရသူမှာ ဘုရားဖူးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဓါးဖြင်.ထိုးသူမှာ ဖောင်တော်ဦး ဘုရားမှ ရွှေဆိုင်း ကန်ထရိုက် ယူရောင်းသူ ဖြစ်သည်ဟု သိရ၍ ဖြစ်သည်။ ဘုရားဖူးက သူတို. ရောင်းသော ရွှေဆိုင်းကို မ၀ယ်ပဲသူ.မှာပါလာသော ရွှေဆိုင်းဖြင်.ဘုရားကို ပူဇော်၍ ဓါးဖြင်.ထိုးခြင်း
Posted by PNSjapan at 11:20 PM0comments
မီးလောင်ဗုံး တရားခံများ ကိုအရးယူမယ် (၂၄-၂-၂၀၁၃) လက်ပန်တောင်း ဒေသ
ယနေ့မွန် - လွဲချိန်ခန့်က လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံတောင်သူများ စုပေါင်းပြီး မီးလောင်ဗုံးသုံး၍ အကြမ်းဖက် ဖြိုးခွဲခဲ့မှုအပေါ် ရှုတ်ချတဲ့ သရုပ်ပြ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်မှု တစ်ရပ် ပြုလုပ်ကျပါတယ်။ ဧရာမ မီးလောင်ဗုံးကြီးတွေ ပြုလုပ်ပြီး ချင်းတွင်းမြစ်ထဲကို ကျိန်စာတိုက်ပြီး မျှောတဲ့ သရုပ်ပြမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကျတာပါ..။သတင်းဓါတ်ပုံ - Monywa Times
မီးလောင်ဗုံးတရားခံကိုအရေး မယူနိုင်ရင်ငါတို့ကို ဥပဒေ စကား လာမပြောနဲ့(၂၄-၂-၂၀၁၃)
Copy from - KO Han Win Aung
ဆဌမအကြိမ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ညှိနှိုင်းစည်းဝေး မှတ်တမ်း။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာမည့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဂျပန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဆဌမအကြိမ် ညှိနိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ နံနက် ၁၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ Kenkoo Plaza ( Ikebukuro )7F, တွင် ကျင်းပခဲ့ကြသည့် သတင်းမှတ်တမ်း ။
Posted by PNSjapan at 10:34 PM0comments
ဒေါ်လာသန်းချီ အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်း သိန်းထွန်း ဘာကြောင့် အရေးယူ မခံရတာလဲ။
ဖေဖော်ဝါရီလ နွေဦးရောက်ပြီဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း နေပြည်တော်မြို့တော်ကြီးရဲ့ အပူချိန်ကတော့ ရေနွေးအိုး မတည်ရဘဲ လက်ဖက်ခြောက် ခပ်သောက်လို့ရမယ့် အနေအထားပါပဲ.။ ဒီနေ့ ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ရှေ့က မန်ကျည်းပင်ရိပ်အောက်မှာ အေးအေးလူလူ ဂျာနယ်တစ်စောင် ဖတ်နေတုန်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့ တူတော်မောင် အရာရှိ ရောက်လာပြီး
“ဘကြီး နေကောင်းလား . ဘာတွေဖတ်နေတာတုန်း” လို့ မေးရာ -
“အေး. အတော်ပဲကွာ. ဘကြီးလည်း တူမောင်ကို မေးချင် သိချင်တာလေးတွေ ရှိနေတာနဲ့ အတော်ပဲ” ဟု ပြန်ပြော လိုက်ပါတယ်။
“ဘာတွေ သိချင်နေတာလဲ ဘကြီးရ” ဟု တူမောင်က ပြောရာ ကျွန်တော်လည်း “ဟို တလောကကွာ ဂျာနယ် တစ်စောင်မှာ ဘကြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ တူမောင်တို့ ဝန်ကြီးဌာနက ဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ အထွေထွေ မန်နေဂျာ/ အင်ဂျင်နီယာချုပ်စတဲ့ အရာရှိကြီး (၈) ဦးကို မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းနဲ့ အဆောက်အဦ စရိတ်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ တင်ပြ တောင်းခံရာမှာ ပိုမိုတွက်ချက် တင်ပြပြီး ထုတ်ယူ တာကြောင့်ရယ်၊ စက်ကိရိယာ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ် ယူရာမှာလည်း ဈေးလျော့ဝယ်ယူတာတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံပိုင် ငွေတွေကို ထုတ်ယူ အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်မှု ပအမှတ် ၆/၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၄၀၉ နဲ့ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်က ဘုရားကုန်း ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် အရေးယူတော့မယ်လို့ ဘကြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်ကွ၊ ဒါပေမယ့် အခုချိန်ထိ အဲဒီအကြောင်း ဘာမှ ထပ်မကြားတော့လို့ ပြီးများသွားပြီလား၊ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲလို့ သိချင်နေတာ ကွ တူမောင်ရ” - ဟု ပြောလိုက်ရာ ကျွန်တော့ တူတော်မောင်က ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ဒါက ဒီလိုရှိတယ် ဘကြီးရဟုဆိုကာ သူတို့ဝန်ကြီးဌာနက သတင်းတွေ အားလုံးကို ပြောပြပါတော့တယ် -
“ဘကြီးပြောတဲ့ ပထမ သတင်းက မှန်တယ်ဘကြီးရ. အမှုလည်းဖွင့်ပြီး နောက်နေ့မှာပဲ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးဌာနကို စသုံးလုံးက လူတွေရောက်လာပြီး လူကြီးပိုင်းတွေကို စပြီးစစ်တော့တာပဲ. သူတို့ရုံးခန်း တွေထဲက ကွန်ပျူတာတွေ၊ ဖိုင်တွေ၊ ဖုန်းတွေ အားလုံးကို သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး အကုန် စစ်တော့တာပဲ
Posted by PNSjapan at 10:25 PM0comments
﻿တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် မနေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာ ဂီတပဒေသာ ကပွဲတခု ပြုလုပ်ပြီး ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်မှာ ကျင်းပခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by PNSjapan at 10:21 PM0comments
အကြမ်းဖက် ရိုက်နက်ခံရသော သုံးတန်းကျောင်းသား လျော်ကြေးပေးပြီး ပြေငြိမ်းခိုင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ်တွင် အသက် ၉ နှစ် အရွယ် မူလတန်း ကျောင်းသား တစ်ဦးအား ဆရာမ ၃ ဦးက အကြမ်းဖက် ရိုက်နက်မူကြောင့် ကျောင်းသား ဖြစ်သူမှာ အကြောက် လွန် သွေးလန့်ပြီး ဆေးရုံတင်ရသည့် အနေအထားထိ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟု ကျောင်းသား မိဘများ က ပြောသည်။
သို့အတွက် မိဘ ဖြစ်သူများက ယခုကဲ့သို့ ရိုက်နက်မူကို မကျေ နပ်သဖြင့် လွန်ခဲ့သော အောက်တို ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က သက်ဆိုင် ရာ ပြည်နယ် ပညာရေးမှူးရုံးသို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
အရိုက်ခံရသော ကျောင်းသားမှာ ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ် ကွမ်းတောင် ကျေးရွာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲမှ ဦးမောင်လှသိန်း၏သား သုံးတန်းကျောင်းသား မောင်မျိုးမင်းနိုင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ တိုင်ကြားသည့် အတွက် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ပညာရေးမှူး ဦးမောင်ကျော်လှ ဦးဆောင်သော အဖွဲ့က လာရောက်ကာ စုံစမ်း စစ်ဆေးမူများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ရိုက်နှက် ခံရသည့် ကလေးငယ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မိဘများ အနေဖြင့် ဆရာမများအား အစိုးရဌာန များသို့
Posted by PNSjapan at 2:28 AM0comments